Ahoana ny fomba hanaovana ny baolina kitra amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2018, 2014 ary 2010 - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Ahoana ny fomba fanaovana ny baolina kitra amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2018, 2014 ary 2010
Ny velaran'ny baolina dia voarindra miaraka amin'ny lava-drano, teknolojia novolavolain'i Adidas antsoina hoe Grip'n'Groove izay natao hanatsarana ny aerodynamika ny baolina
Ity dia horonantsary an'ny ny tsipika famokarana ny baolina Tompondaka Erantany. Mahagaga raha aseho sy hazavaina ny fomba sy ny teknika rehetra izay mihatra. Fa io no ananantsika ;-)
Fa raha liana kokoa amin'ny fomba sy ny antony nanamboarana azy toy izao ianao. Eto ianao dia manana andiana horonan-tsary Adidas dimy. Amin'ny anglisy izy ireo fa na tsy azonao aza dia misy sary mendrika azy.
[nasongadina] Fanavaozana. Very ireo horonan-tsary ireo ary tsy hitako intsony :-( Avelako ny index an'ireo faritra 5 raha sendra hitako indray izy ireo afaka manavao. Manampy zavatra fanampiny momba ny baolina amboara eran-tany aho; - ) [/ Nasongadina]
Fizarana 1/5: Resadresaka nifanaovana tamin'i Kaka, Alonso, Ballack ary Lampa.
Fizarana 2/5: Famoronana aingam-panahy.
Fizarana 3/5: Mampivelatra ny fihazonana tonga lafatra.
Fizarana 4/5: manao injeniera ny endrika tonga lafatra.
Fizarana 5/5: Mamelona an'i Jabulani ho velona.
Fampahalalana bebe kokoa amin'ny:Wikipedia
Lahatsary iray hafa mampiseho ny fomba nanaovana ny baolina Tompondaka Eran-tany 2014 tany Brezila
Ho hitantsika eo ny endrik'ilay baolina amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taona 2018 any Russia
Ahoana ny fomba hanaovana vuvuzela
Ahoana ny fomba hanaovana intercom